WIFI thermostat: Atụmatụ, ọrụ na uru | Network Meteorology
O nwere ike ịbụ na ị nụtụla a WIFI thermostat ma ọ bụ smart thermostat. Eleghị anya ị ga-eche na ọ bụ ihe yiri Netatmo thermostat. Nke a bụ n'ihi na ha bụ ndị izizi pụtara. N'ụzọ dị otu a, enwere ike inye nnukwu ụlọ teknụzụ n'ụlọ anyị. Ma ọ bụ na mgbe frosts na crude obere okpomọkụ nke oyi na-abata anyị na-amalite ịjụ ma ọ dị mkpa iji kpo oku ma ọ bụ na ọ bụghị n'ụlọ. N'aka nke ozo, anyi kwesiri ikpo oku, ma na nke ozo, anyi na-atu egwu ego ego eletrik di elu.
Anyị ga-ekwu maka thermostat nke WIFI ma nyochaa atụmatụ ya niile. Na mgbakwunye, anyị ga-emesi uru na ọghọm dị n'iji ya eme ihe. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu, na-agụ 🙂
1 Kedu ihe bụ WIFI thermostat?
3 Akụkụ ndị metụtara ụlọ
4 Onye na-eji WIFI thermostat?
Kedu ihe bụ WIFI thermostat?
Mgbe anyị na-ekwu maka ikpo ọkụ, anyị anaghị achọpụta na teknụzụ enwegogo n'ọkwa buru ibu ma na ọtụtụ ndị nrụpụta na-echegbu onwe ha n'okwu nke ụgwọ. Ha na-emeziwanye mkpụrụ ma na-achọ ihe ndị ọzọ iji mee ka anyị belata ọkụ eletrik anyị. Usoro teknụzụ jikọtara na data ịntanetị na-agbanwe kemgbe ọtụtụ afọ. N'ihi ya, ọ na-enye anyị ohere ịkwalite iji kpo oku nwere nkasi obi ka ukwuu.
Cheedị na ị ga-enwe ike ịgbanye okpomoku gị mgbe ị na-arụ ọrụ ka ọ bụrụ na ị laa n'ụlọ, gburugburu ga-adị gị mma. Nke a bụ ihe WIFI thermostat na-eme. Ọ bụ ngwaọrụ eletrọniki nwere ike ịhazi okpomọkụ nke kpo oku nke ụlọ site na netwọk WIFI. N'ihi ya anyị nwere ike ịchịkwa ya site na ngwa maka smartphone.
Nke a abụwo ezigbo nnupụisi ezi uche dị na thermostats ma mee ka njikwa njikwa nke ndị na-ekpo ọkụ dị ukwuu. Nke a emetụtabeghị nke ọma.
Na mgbakwunye na itinye ọrụ njikwa WIFI site na ama anyị, ọ gụnyere ọrụ ndị ọzọ na-enyere anyị aka ịkwalite nkasi obi, nchekwa ma melite ojiji izugbe. Nke a pụtara na igwe ihe omimi nwere ike ịmụ ihe site na omume anyị na ịmara ihe ezigbo okpomọkụ bụ maka anyị. O nwere mmemme amụma ihu igwe nke ọ nwere ike ịtụ anya ịrị elu ma ọ bụ ịrị elu okpomọkụ. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ozi zuru oke na oriri ma na-enye anyị ohere ịhazi mmefu ego.
Ihe ndị a niile na-enyere anyị aka na oriri na nkasi obi anyị iji mee ka ndụ dịkwuo mfe. Ọ nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na anyị ahapụla ụlọ iji dozie ọnọdụ okpomọkụ ma bulie oriri. Arụ ọrụ ndị a na-azọpụta anyị na a ezigbo tuo na ọkụ eletrik ụgwọ. Site na mmeghari ole na ole a ị ga - enyere anyị aka imeziwanye njiri oriri, ebe ọ bụ thermostat na - emere anyị ihe.
Chekwa ọkụ eletrik bụ ihe na-echegbu ndị mmadụ karịa, ebe ọnụahịa ọkụ eletrik na-arị elu mgbe niile. Ya mere, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ: ma anyị nwere kpo oku ma anyị bulie ọnụahịa nke ụgwọ ahụ, ma ọ bụ na anyị ga-ajụ oyi na-enweghị ya. Ugbu a nke a anaghị eme ọzọ n'ihi ịdị adị nke thermostats ndị a.
Dabere na ndị na-emepụta WIFI thermostat, ego a na-enweta site na ike ebuli ojiji nke kpo oku na oge ọ na-anọgide na-arụ ọrụ. Nke ahụ bụ, ndị a thermostats na-enwe ike ime ka ọrụ ha dị elu karịa na-enweghị nkasi obi kpam kpam. Agbanyeghị, thermostat dị egwu anaghị arụ ọrụ n'okpuru otu ezigbo njirisi maka ojiji. Ọ naghị elebara usoro ihe omume gị anya, ma ọ bụ mkpuchi ụlọ nke ụlọ ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ dị na mpụga.
Ihe a niile na - eme ka ha rụọ ọrụ mgbe niile n’otu ụzọ ma ọ bụ n’ezie a na - emefusị ike dị ukwuu n’oge enwere ike ịkwụsị ya.
Akụkụ ndị metụtara ụlọ
Igwe ihe eji amata ihe dị iche iche na-echebara ọtụtụ akụkụ dị mkpa nke ụlọ iji belata oriri. N'ime akụkụ ndị a anyị na-ahụ:
Omume anyị ibi ndụ dị iche n’ezinụlọ ọ bụla. Ngwakọta igwe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ otu ụzọ mgbe niile. Agbanyeghị, WIFI thermostat na-agbanwe oge anyị. Iji maa atụ, thermostat mara ihe oge anyị ji erute n'ụlọ yana oke okpomọkụ ị masịrị gị dị ogo 20. Ọ bụrụ na ụbọchị ahụ dị oyi karịa ka ọ na-adịkarị, igwe oku ga-arụ ọrụ ihe dị ka nkeji 40 tupu ụbọchị ọzọ ka ọnọdụ okpomọkụ ahụ wee sie ike mgbe ị laruru. N'aka nke ọzọ, ụbọchị nwere ike ịdị ọkụ karịa naanị ihe dị ka nkeji iri na ise iji kpoo ụlọ ahụ ọkụ.
Buru n’uche mkpuchi ihe n'ụlọ iji gbakọọ ihe ọkụkụ na-efu. N'ụzọ nke a, ọ na-ebuli arụmọrụ kacha elu.
Oge amụma. Ọ nwere ike ijikwa ozi gbasara ihu igwe iji rụọ ọrụ dịka ọnọdụ si dị n'èzí.
Ọrụ ndị a niile na-eme ka arụmọrụ ụlọ gị dịkwuo mma ma na-echekwa ike na ego.
Onye na-eji WIFI thermostat?
Emere ụdị thermostat a maka ụdị mmadụ dị iche iche. Site n'inwe ike ịchịkwa nkasi obi nke ụlọ anyị, enwere ọtụtụ ohere ha na-enye anyị dabere na omume. Na nkenke, ha na-eme ka ndụ dịrị anyị mfe ma nyere anyị aka ịchekwa ego.
Mayfọdụ nwere ike na-eche ụdị mmadụ thermostat smart a ka emere maka ya. Ọ dị mma, lee ndị kachasị mkpa:
Ndị mmadụ na-anọ ogologo oge mgbe ha na-anọghị n’ụlọ. Nke a bụ maka na mgbe ha lara ụlọ ha na-ahụ oyi. Ọ bụrụ na ha nwere thermostat dị iche iche, ọ ga-ewe oge iji rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ha ahapụ ya na ha ga-efunahụ ike ma metụta ọnụahịa nke ọkụ.
Maka ụlọ ndị nwere okpomoku mbụ ma nata ụgwọ ọkụ eletrik dị elu.
N’ime ọfịs, ogige azụmahịa na ụlọ ahịa ndị kwesịrị ijigide ezigbo nkasi obi maka ndị ahịa. Goodzọ dị mma iji nweta uru ka mma bụ iji belata ọnụahịa mmepụta. Kedu ihe ka mma karịa ịchekwaa ụgwọ ọkụ eletrik na thermostat WIFI.
Ndi nwere ulo obibi ha bu ezigbo ihe iji zere ikwu oke ugwo.
Maka ụlọ ndị ahụ nwere ihu igwe oyi ma na-arịa obere okpomọkụ ọtụtụ ụbọchị n'afọ.
Thoselọ niile ahụ nwere mkpuchi ochie.
Maka ezinụlọ nwere obere ụmụaka ma ọ bụ ndị agadi na-achọ nlekọta ọzọ.
Chọta thermostats WIFI kachasị mma nke kwekọrọ na ụdị ndị na-ekpo ọkụ dị iche iche ma ị nwere ike ịhazi ya mgbe ọ bụla ịchọrọ. E nwekwara ndị nke nwere wired na ndị e ji maka ite mmiri n’otu n’otu.
Enwere m olileanya na site na isiokwu a ị kpebiri ịchekwa na ụgwọ ọkụ eletrik gị wee bido ụwa nke smart kpo oku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Igwe ọkụ WIFI